Miady amin’ireo fanafody hosoka amin’ny alalan’ny sehatra antserasera vaovao ny startup teknolojia ao Tanzania · Global Voices teny Malagasy
Manodidina ny 100.000 isa-taona no matin'ny fanafody sandoka eto Afrika
Voadika ny 31 Oktobra 2019 5:08 GMT
Vakio amin'ny teny Français, 繁體中文, Español, українська, 한국어, Italiano, हिन्दी, bahasa Indonesia, ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ, English
Nofiratsy misy fiantraikany amin'ny olon-drehetra manerantany ny olana amin'ny fanafody hosoka – ka anisan'izany i Tanzania. Raha nametraka fitsipika momba ireo orinasan'ny fanafody ny governemanta, dia mbola misy ny tandrevaka ahafahan'ny olona mivarotra fanafody sandoka amin'ny aterineto sy any amin'ireo magazay noho ny tsy fisian'ny fanamarinana alohan'ny hidiran'ny fanafody eny an-tsena.
Ankehitriny, dia misy ny sehatra antserasera iray antsoina hoe PharmLinks, naorina tany Tanzania, izay te-hampitsahatra ny krizy amin'ny fanafody hosoka. Mampifandray ireo mpamatsy fanafody sy ireo mpivarotra ambongadiny amin'ireo mpaninjara any Tanzania ity tranonkala ity, mba hividianana vokatra tsara kalitao avy amin'ireo fivarotam-panafody ara-dalàna ary manaramaso ny tsena ihany koa.
Frank Arabi, mpianatra mpitsabo ao amin'ny Oniversiten'i Muhimbili momba ny Fahasalamana sy ny Siansa, no anisan'ny niara-nanorina ny PharmLinks rehefa nahatsikaritra ireo fanamby maro atrehan'ny indostrian'ny fanafody any Tanzania izy, ao anatin'izany ny olana amin'ny fahazoana fanafody, izay miteraka fepetra tonga lafatra ho an'ny orinasam-panafody hosoka.
Milaza ny Fikambanana Manerantany ho an'ny Fahasalamana (OMS amin'ny teny frantsay) fa fahafatesana eo amin'ny 100.000 isan-taona ao Afrika no misy ifandraisany amin'ny fanafody hosoka sy tsy manara-penitra ary mitombo ny tarehimarika.
Mihevitra i Arabi fa olana goavana ny olana amin'ny fanafody hosoka ary mila fomba maro hiadiana amin'izany. “Mitentina 200 miliara dolara isa-taona ny tsenan'ny fanafody hosoka manerantany,” hoy ny OMS, araka ny notaterin'ny Reuters.
Tamin'ny volana Jona 2019, namoaka fampitandremana momba ny fisian'ny fanafody hosoka ao Tanzania izay mitovy amin'ny Gentrisone, fanafody lakiremy ampiasaina amin'ny aretina azo avy amin'ny bakteria ny governemanta tamin'ny alàlan'ny Fahefana Misahana ny Fanafody sy Fitaovana Ara-Pitsaboana (TMDA). Nanambara ny fampitam-baovao eny an-toerana, Daily News fa fantsona 4.118 no hita tany amin'ireo faritra enina samy hafa ao Tanzania.
Tsy ny Pharmlinks ihany no sehatra nomerika mifantoka amin'ny fiadiana amin'ny fanafody hosoka ao Afrika. Tamin'ny taona 2018, natsangana ny sehatra iray ao Nizeria, medsaf, mba hiadiana amin'ireo fanafody hosoka mivezivezy ao amin'ny firenena Afrikanina Andrefana, ary misy ihany koa ny FarmaTrus ao Ghana.